Ikhabhathi yeTelecom yokupholisa ababoneleli kunye neFactory-China Telecom ikhabhathi yokupholisa abavelisi
Isitshintshi sobushushu seTelecom...
Thermosiphon Ubushushu bokutshintshana...
I-BlackShields yangaphandle ikhabhinethi edibeneyo yenzelwe unxibelelwano lweselula olusasazwa kwisikhululo esisisiseko, esinokuhlangabezana nesicelo sobume bonxibelelwano lwangaphandle kunye nofakelo. Ukunikezelwa kwamandla, ibhetri, izixhobo zokuhambisa intambo (i-ODF), izixhobo zokulawula ukushisa (i-Air conditioner / i-Heat exchanger) inokuhlanganiswa kwikhabhinethi ukuhlangabezana nesicelo somthengi njengevenkile yokumisa enye.
I-BlackShields HC series Combo Air conditioner iyilwe njengesisombululo sokugcina amandla okulawula imozulu yekhabhinethi kwindawo ecela umngeni ngaphakathi nangaphandle. I-AC edibeneyo ye-Air conditioner kunye ne-DC Thermosiphon yokutshintshiselana kwe-Heat, ixazulula ngokufanelekileyo ingxaki yobushushu bekhabhinethi yangaphakathi / yangaphandle kunye nokufezekisa ubuninzi bokusebenza kwamandla.
BlackShields HM series DC Thermosiphon Heat exchanger yenzelwe ukulawula imozulu yangaphakathi/yangaphandle kwikhabhathi kwindawo ecela umngeni ngaphakathi nangaphandle. Yinkqubo yokupholisa engenzi nto esebenzisa amandla okutshintsha kwesigaba ukupholisa ngaphakathi kwikhabhinethi. Isombulula ngokufanelekileyo ingxaki yobushushu bekhabhathi yangaphandle kwaye isetyenziswa ngokubanzi kwiikhabhathi zangaphakathi nangaphandle kunye neendawo ezivaliweyo ezinezixhobo ze-elektroniki ezinobuthathaka.
Le yunithi isebenzisa ngokupheleleyo indalo umahluko ngaphakathi nangaphandle lobushushu. Ubushushu bendawo ebiyelweyo yangaphakathi bupholiswa ngokusetyenziswa okusebenzayo komphunga wefriji. Ukutshintshiselana kobushushu okwenziwayo kusekelwe kwi-convection yendalo, ejikeleza ulwelo kwisiphaluka esivaliweyo esivaliweyo ngaphandle kokufuna impompo eqhelekileyo okanye i-compressor.
Umtshintshi wobushushu kwikhabhinethi yeTelecom
Uthotho lwe-BlackShields HE I-Heat exchanger iyilwe njengesisombululo sokupholisa sokulawula imozulu yangaphakathi / yangaphandle kwikhabhinethi kwindawo ecela umngeni ngaphakathi nangaphandle. Isebenzisa ubushushu bomoya obungaphandle, itshintshiselana ngayo kwikhawuntari esebenza kakuhle yokuqukuqela kwakhona kwaye ngaloo ndlela ipholisa umoya wangaphakathi ngaphakathi kwikhabhathi ivelisa iluphu yangaphakathi, epholileyo evaliweyo. Isombulula ngokufanelekileyo ingxaki yobushushu bekhabhathi yangaphandle kwaye isetyenziswa ngokubanzi kwiikhabhathi zangaphakathi nangaphandle kunye neendawo ezivaliweyo ezinezixhobo ze-elektroniki ezinobuthathaka.
Iyunithi yokupholisa yeBlackShields TC TEC Peltier yekhabhathi yenzelwe ukupholisa ngaphakathi/ngaphandle kwikhabhathi kwindawo ecela umngeni ngaphakathi nangaphandle. Isebenzisa iteknoloji ye-thermoelectric kwaye yenzelwe ukubonelela nge-48V DC. Inokususa ubushushu obugqithisileyo kwisixhobo sombane esinje ngeebhetri ezikwindawo ezivalekileyo kwaye lolona khetho lulungileyo lokupholisa igumbi lebhetri.
BlackShields DC Air conditioner yenzelwe ukulawula imozulu yezixhobo kwezi ndawo ngaphandle kwegridi enomngeni kubume bangaphakathi nangaphandle. Ngeenyani ze-DC compressor kunye nabalandeli be-DC, isombulula ngokufanelekileyo ingxaki yobushushu bekhabhathi yangaphakathi / yangaphandle kwaye lukhetho olufanelekileyo lwezikhululo ezisisiseko ezinamandla ahlaziyekayo okanye amandla eHybrid kwiindawo ezingaphandle kwegridi.
BlackShields AC uthotho I-air conditioner yenzelwe ukulawula imozulu yekhabhathi ye-telecom kwindawo ecela umngeni ngaphakathi nangaphandle. Ngombhobho omfutshane womoya kunye nokuhamba komoya osasazwa kakuhle, ukusombulula ngokufanelekileyo ingxaki yobushushu bekhabhinethi yangaphakathi / yangaphandle kwaye lukhetho olulungileyo lwesicelo se-telecom.